Wasiirka arrimaha gudaha oo kulan la qaatay dhigiisa dalka Suudaan | Radio Muqdisho
Wasiirka arrimaha gudaha oo kulan la qaatay dhigiisa dalka Suudaan
Published on January 2, 2013 by admin · 1 Comment · 1,193 views
Wasiirka arrmiha gudaha iyo amniga Qaranka ayaa maanta magaalada Khartuum ee xarunta dalka Suudaan kulan kula qaatay dhigiisa dalkaasi wax ayna isku afgarteen arrimo ay ka midyihiin tababaro loo fidinayo ciidamada Booliska Soomaaliya iyo maamulada gobollada dalka.
C/kariim Xuseen Guuleed wasiirka arrimaha gudaha iyo amaanka Qaranka xukuumadda Soomaaliya oo socdaal shaqo ku joogo dalka Suudaan ayaa magaalada Khartuum kulan kula yeeshay dhigiisa dalkaasi iyagoo ka wada hadlay sidii ay dowladda Suudaan gacan uga geysan laheyd hormarinta ciidamada booliska Soomaaliya iyo sidii tababar loo siin lahaa.
Wasiirka oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in dhigiisa dalka Suudaan ay ka wada hadleen sidii ay tababaro u siin lahaayeen saraakiisha booliska, ciidamada, waaxda hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha iyo sidii ay dowladda Suudaan gacan weyn uga geysan lahaayeen tababar loo fidinayo ciidamo gaar ah kuwaas oo loogu talagalay in ay si gaar ah u sugaan amaanka magaalada Muqdisho.
Sidoo kale wasiirka ayaa intaasi ku daray in dhigiisa dalkaasi ay ka wada hadleen sidii loo sii ambaqaadi lahaa heshiisyo hore iyo kuwo cusub oo lagu soo kordhinayo kii hore, isagoona xusay in kulanka uu ku soo dhamaaday guul iyo is afgarada.
Wasiirka arrimaha gudaha ayaa ka mid ah wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya kuwaas oo mudo laba maalin ah socdaal ku joogo dalka Suudaan.
Axmed says:	January 2, 2013 at 7:59 pm	Dowladda waxaan usoo jeedinaynaa ammaan balaaran, waxaan u aragnaa inay u shaqeynayso sidaan rabnay, ilaahayna ka baryeynaa inuu guuleeyo dalkeenana noo dhiso! Walaalaha soomaaliyeedna waxaan leenahay codkiina ku biiriya nabadda iyo qarannimada, dulli iyo gunnimo waa soo aragnay maanta waxaan higsanaynaa nabad iyo horumar. Qofkasta wuxuu dantiisa ku gaarikaraa qaranimada iyo gobanimada kala qoqob iyo gunnimo dambe maya maya maya.